Indlu kufuphi neSorochan
Сорочаны, Дмитровский район, Russia
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguСветлана
Indlu yelizwe eqashisayo kufuphi ne-sports resort Sorochany, i-200 yeemitha ukuya kwi-9.10 i-slopes emnyama. Dmitrovskoe uhola we-43 km ukusuka kwisixeko. Indlu entsha enemigangatho emi-2 kwisitayile seAlpine chalet enendawo yomlilo kunye nemigangatho eshushu, ukusetyenziswa unyaka wonke ngeveranda evulekileyo. Iploti yeehektare ezi-6, i-apula, ihlathi, amakhowa, umlambo, ukuloba, intwasahlobo, ukuzola kunye nokukhululeka. Kukho yonke into - ukuphumla okulungileyo!
Indlu ibekwe kufutshane ne-9-10 slope ye-Sorochany ski resort.
\_u00A0Ibhedi enkulu eyi-1, iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-3
I-Wifi – i-20 Mbps
Kuzolile, kuzolile, kulinganisiwe, kupholile, ukuba ufuna ukuthatha ikhefu kwisixeko esixineneyo kwimeko yentuthuzelo kunye nokufudumala, yiza apha! Ukuba kufutshane kwendawo yokutyibiliza ekhephini kunika ithuba lokuzonwabisa okusebenzayo ebusika nasehlotyeni. Ebusika, ungaya kwi-skiing, i-snowboarding, i-snowtubing kunye ne-ice rink! Yiyo loo nto thina nabahlobo bethu sitsaleleke kangaka apha!
Sizama ukungaphazamisi iindwendwe zethu, kodwa ukuba unayo nayiphi na imibuzo, sihlala sinxibelelana!